G-Shock a casriga Casio ee ragga dhabta ah | Androidsis
G-Shock casriga Casio ee ragga dhabta ah
Daniel Ogando | | Noticias
Markaan ka hadleyno Casio Saacadaha ay adeegsadaan malaayiin isticmaaleyaal ah adduunka oo dhan ama xusuus-qorrada elektaroonigga ah ee caan ku noqday 90-maadkii ayaa maskaxda ku soo dhacaya.
Casio mar hore waa soo saare kale oo soo galay adduunka ganacsiga ee taleefanka gacanta, laakiin maahan a smartphone qof kasta, G-Shock waa taleefan heer sare ah taas ayaa lagu soo bandhigay Waxaaad ee sanadkan.
Waa maxay waxyaabaha ku saabsan taleefankan?
Asal ahaan waxaan ka hadlaynaa taleefan aad rabto inaad haysato markii aad ku dhex lumiso kaynta dhexdeeda, in haddii ay suurogal tahay qayb wanaagsan oo batteri buuxda leh, taleefan leh iska caabin u gaar ah cadaadiska biyaha ilaa 10 mitir qoto dheer y Taageero dhibcaha ilaa 3 mitir.
Laakiin maahan markii ugu horreysay ee Casio uu sii daayo taleefan iska caabin ah, toddobaadyo ka hor ayay sidoo kale soo bandhigtay Gzone Commando un smartphone aad u adkaysi badan, laakiin qaabkan ugu dambeeyay wuxuu umuuqdaa mid aad u adag oo leh khad taxaddar badan.
El G-shoog isaga ayaa yeelan doona Android OS, iyo a kamarad gadaal leh flash, laakiin nooca iyo astaamaha qalabkiisa wali lama yaqaan.
Maahan taleefanka casriga ah ee ugu shaqeynaya ama sida ugu fudud, laakiin waa taleefan ku habboon dadka haysta shaqooyin adag, taas oo taleefanka uu ka yar yahay welwelka oo uu noqdo caawimaad xaaladaha ugu adag.
Weli waxaa jira xog badan oo maqan oo ku saabsan casrigaan casriga ah ee G-Shock, sida kan nolosha batteriga iyo madax-bannaanideeda wicitaannada, waxtar ma leh in la helo taleefan noocan oo kale ah haddii muddada ay ku eg tahay dhammaadka maalinteena shaqada, iyo sidoo kale nooca Android, haddii aad caymis ku leedahay meeraha oo dhan iyo ugu dambeyn macluumaad aad u muhiim ah; qiimaha ugu dambeeya.
source: G- Shockzone
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » G-Shock casriga Casio ee ragga dhabta ah
Ma loo heli doonaa Argentina ??? Waan rabaa
Qeyb taxane ah oo laxiriira qaabeynta ... aad ufiican!
waa maxay qiimaheeda?
Qaado lacagtayda oo dhan ??, Waxaan rajeynayaa inaan si dhaqso leh ku tago Latin America
Huawei wuxuu soo saaray taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah: Huawei Honor